Iwu ahihia nke Illinois - ojiji nke osisi cannabis & nke mere na Illinois 'CRTA
Chọrọ obanye na Canlọ Ọrụ Mmeba Ahụ Iwu?
Kedu ihe iwu ọhụrụ ahụ na-ekwu maka ojiji nke cannabis na Illinois?
A na-enyefe iwu ọhụrụ ana - eme ka ị mariụ wii wii nke ntụrụndụ na Illinois na Mee 31, 2019. Steeti ahụ bụ iwu nke iri na otu na mba ahụ nyere ohere ị mariụ wii wii ntụrụndụ, mana steeti mbụ nyere iwu inye iwu cannabis site na usoro mmebe iwu.
Dika iwu ohuru cannabis a, "General Assembly na-achọpụta ma kwupụta na iji cannabis kwesịrị ịbụ iwu maka ndị gbara afọ 21 ma ọ bụ karịa."
Iwu iwu Illinois
N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle ihe ọhụrụ Iwu Iwu Illinois Nke a dị irè ugbu a na Jenụwarị 1, 2020, na gaba. Cheta na iwu cannbis na-ebuputa ngwa ngwa, yabụ na-elele oge niile maka iwu cannabis kachasị ugbu a na Illinois.
Onye ka ekwe ka Ree Marijuana?
Na mbido, ọ bụ naanị ndị nwere akwụkwọ ikike ka ekwenye na-ere marijuana ọgwụ mgbe ụgwọ ahụ ghọrọ iwu na Jenụwarị 2020. A ga-enyekwu ụlọ ahịa ndị ọzọ ikike n'etiti etiti afọ.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ọnụnọ mgbasa ozi na mpaghara dị iche iche na steeti. Tupu mmalite nke 2020, a na-ebu amụma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa 300 ga na-ere wii wii.
Agbanyeghị, ọ ka dị n'aka ọchịchị ime obodo na nke gọọmentị ikpebi ma ndị na-ere wii wii nwere ike rụọ ọrụ na mpaghara juridistinction ha.
Ebee ka anwụrụ ga-ese?
Dabere na iwu ọhụrụ ahụ, a ga-anabata cannabis anwụrụ n'ụlọ yana n'ime ụlọ ndị na-ere wii wii. Ka osiladi, a ga-amachibido anwụrụ ọkụ na mpaghara ndị a:
Mpaghara ọha, dịka okporo ụzọ na ogige
N’ime ugboala ndi mmadu ma nke ozo
N’akụkụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, ma ọ bụ n’akụkụ ndị na-anya bọs ụlọ akwụkwọ ka nọ ọrụ
N'ime ụlọ akwụkwọ. Agbanyeghị, anaghị etinye ụdị maka marijuana ahụike
Gide onye ọ bụla na-erubeghị afọ iri abụọ na otu
Ọ bụ ezie na a na-anabata wii wii n'ụlọ niile dị n'ụlọ gị, ndị nwere ihe onwunwe nwere ikike ịkpa ụdị ihe ahụ n'ụlọ ha. A ga-ahapụ kọleji na mahadum ka ha gbochie igbo anwụrụ n'ime ụlọ ọrụ.
Onu ogugu nke ahihia ga - enweta ya
Dịka iwu si dị, a ga-ekwe ka ndị bi na Illinois nwee gram 30 nke ifuru ahịhịa, gram 5 nke mkpụrụ osisi cannabis, na 500 milligrams nke ngwaahịa cannabis nyere. Ngwaahịa ndị a na-enweta cannabis gụnyere tinctures na nri.
A ga-etinye ụtụ ahịa maka ngwaahịa wii wii niile. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa nke THC erughị 35% ga-enwe ụtụ ahịa nke 10%. A ga-atụ ụtụ na ngwaahịa ọ bụla a na-enweta na cannabis na 20%. Ngwaahịa nwere mkpokọta THC karịa 35% ga-enwe ụtụ ahịa ahịa nke ihe dịka 25%.
Wezụga ụtụ ahịa ahịa, a ga-atụ ụtụ isi 7% na wii wii na-ere ndị na-ere nri ga-ere ya. O yikarịrị ka nke ahụ, na njedebe nke ụbọchị, a ga-enyefe ndị ahịa ego a.
Ebee ka Marijuana ga-ere si?
Ugbu a, enwere ụlọ ọrụ ịkụ wii 20 na Illinois. Na mbido Jenụwarị 2020, ihe ndị a ga-abụ naanị ụlọ ọrụ a ga-ahapụ ka ọ na-eto wii wii. N'ime afọ, a ga-ahapụ ndị omenkà nwere mmasị ịzụlite wii wii ka ha nyefee akwụkwọ ikike ha. A ga-enye akwụkwọ ikike iji rụọ ọrụ nwere ike iru 5000 square ụkwụ ahihia.
Mmadu Nwere Ike Growntakwu Marijuana?
Jukọ wii wii ga-abụ ihe iwu kwadoro nye ndị na-ajuụ wii wii maka ebumnuche. A ga-ahapụ ndị ọrịa a ka ha puo ahịhịa wii wii 5 n'oge ọ bụla. N’aka nke ọzọ, a na-agaghị anabata ndị na-eme wii wii ntụrụndụ ka ha kụọ wii wii n'ụlọ ha. Ime nke a ga-adọta ntaramahụhụ obodo nke $ 200.
Onye ekwe ka O toro Cannabis na Illinois
Ọ bụrụ n ’edenyela aha gị n’usoro ọmịiko nke usoro ọgwụ cannabis, ma ị nọrọ n’etiti afọ ole iwu kwuru, ị nwere ike ịjuụ igbo. Ikwesiri ibiri onye bi na steeti a ka ekwee ahihia ahihia n’ulo. Dika iwu a si di, onye obibi di "Onye obibi na steeti ụbọchị iri atọ."
Ọ bụrụ na ị na-eto wii wii, ị ga na-ahụ maka osisi. Inwere ike ịnwere onye ọrụ gị mee nke a obere oge mgbe ị na-anọghị. Nke ahụ kwuru, ekwesighi ịbanye ma ọ bụ jiri ndị ọzọ na-enwetaghị ikike iji osisi ahụ.
Etu esi eto Cannabis n’ụlọ
Dịka iwu siri dị, a ga-akụ ahịhịa wii wii n'ebe akpọchiri akpọchi ma kpọchiri ya. Nke a ga - agba mbọ hụ na ndị enweghị ikike ịbanye na osisi ahụ. Ọ ga-abụ ihe iwu na-akwadoghị itolia osisi n'ime ebe ọha mmadụ nwere ike ịbanye na ya.
Ọzọkwa, a machibidoro onye ọ bụla edebanyere aha maka ịkọ mkpụrụ osisi cannabis inye ihe ọkụkụ ahụ ma ọ bụ ngwaahịa cannabis nyere ndị agbata obi, ndị enyi, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ maka okwu ahụ. Ime nke a abụghị naanị na-adọta ntaramahụhụ, kama ọ ga-edugakwa na iweghachite ụlọ na-eto eto.
Ebee ka anyị ga-esi nweta mkpụrụ Mkpụrụ?
A ga-enye mkpụrụ wii wii dị iche iche ka enye ya ikike iji ree ngwaahịa wii wii. Ọ ga-abụ ihe iwu na-akwadoghị ịzụta mkpụrụ maka onye ọzọ. Naanị ndị edebanyere aha n'okpuru iji ọmịiko ka a ga-ahapụ ka ha zụta mkpụrụ ma tolite ahịhịa osisi na-enweghị ikikere.
Ojiji Akụrụngwa na Nwere Ntughari nke Ndị Na-erubeghị Afọ 21
Dabere na iwu ọhụrụ ahụ, mmadụ ọ bụla na-erubeghị afọ 21 ga-enweta cannabis ga-abụ mpụ iwu. Ntaramahụhụ maka mmejọ dị otú ahụ ga-adabere n'ọnọdụ dị ugbu a, ma nwee ike ịgụnye:
Iwepu akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụrụ na onye ahụ na-akwọ ụgbọala n’oge ha mere mmehie ahụ
Ezigbo erughị $ 500 ma ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta na-ekwe ka onye ọ bụla dị n'okpuru afọ iji wii wii
Mgbe a ga -ebụ mọbụ ma ọ bụrụ na enwere mpụ ndị emehiere n'oge ị ofụ wii wii
Ezie na achọrọ ka ị mepụta akwụkwọ njirimara iji chọpụta afọ gị mgbe ị na-azụ ngwaahịa wii wii, a ga-echebe ozi nkeonwe gị maka ebumnuche nzuzo. Agaghị achọ ka ndị na-ere ya dekọọ ozi gbasara gị. Ọ bụrụ na ha emee, ha ga-ebu ụzọ nweta nkwenye gị.
Ozugbo ụgwọ a ghọrọ iwu, ndị chọrọ ị mariụ wii wii maka ntụrụndụ ma ọ bụ maka ahụike, ga-enwe oge dị mfe ịnweta ngwaahịa wii wii chọrọ ha. Ha ga-enwetakwa uru maka ego ha n'ihi na azụmahịa niile ga-eme dị ka iwu si dị.
Agbanyeghị, ndị na-erughị afọ 21 ga-ahapụ ị usingụ ma ọ bụ inwe wii wii na ngwaahịa ya ọ bụla nwere ya n'ihi na nke a nwere ike idobe ha na ndị isi ndị mmanye iwu.